Maxay ka dhigan tahay in Eritrea lagu eedeeyo xasuuq ka dhacay Itoobiya? | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA Maxay ka dhigan tahay in Eritrea lagu eedeeyo xasuuq ka dhacay Itoobiya?
Maxay ka dhigan tahay in Eritrea lagu eedeeyo xasuuq ka dhacay Itoobiya?
After repeated attempts, @EthioHRC deployed a mission to Aksum, in #Ethiopia‘s #Tigray, b/n Feb 27-March 5.
The preliminary probe finds that grave human rights abuses have been committed & over 100 civilians were killed by Eritrean soldiers on Nov 28-29. https://t.co/2PHd7JcwMq
— Ethiopian Human Rights Commission (@EthioHRC) March 23, 2021
Qof goob-joog ahaa ayaa guddiga u sheegay in ciidamada Eritrea ay guri ka wateen oday 70 jir ahaa iyo laba wiil oo uu dhalay, “kadibna ay ku toogteen barkad biyo oo gurigooda u dhaweyd.”
“Maadaama tacaddiyadan ay u dhigmaan dembiyo ka dhan ah aadanaha ama kuwo dagaal, waxaa muhiim ah in baaritaan wax ku ool ah lagu sameeyo xaaladda bani’aadannimo ee gobolka Tigray,” ayaa lagu sheegay warbixinta guddiga.
Eritrea ayaan weli ka jawaabin eedeymaha loo soo jeediyay. Balse markii warbixin tan la mid ah ay dhammaadkii February shaacisay hay’adda Amnesty International, xukuumadda Asmara ayaa ku tilmaantay mid “la buunbuuniyay”.
Warbixinta guddiga ayaa ku soo beegmaysa maalin uun kadib markii ra’iisal wasaare Abiy Axmed uu qiray in ciidamada Eritrea ay soo galeen gobolka Tigray kadib dagaalkii bilowday November.
“Laba beri ka hor inta aanu Abiy ka hadlin arintan, waxaa khudbad dheer jeediyay Isaias Afwerki taasoo laga dhadhansanayay in xurgufi ay labada dhinac dhexmartay. Safiirka Eritrea u fadhiya London ayaa diidmo ka muujiyay hadalka Abiy. Marka durba waxay u egtahay far-isku-fiiq iyo eedeyn, haddii ay arintaas sii xoogeysatana waxaa dhacaysa in labada dhinac ay isku dhacaan,” ayuu yiri Faysal.